नयाँ भेरियन्टको संक्रमण दर उच्च छ, मृत्युदर भने उस्तै हो - Sabaiko Sandes
Sabaiko Sandes २०७८, २० बैशाख सोमबार ०३:५५
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट एमबिबिएस तथा युनिभर्सिटी अफ इलिनोई, सिकागोमा जनस्वास्थ्य र इन्टरनल मेडिसिनमा स्नातकोत्तर तथा संक्रामक रोगमा सुपर स्पेसलाइजेसन गरी सदर्न इलिनोई विश्वविद्यालयमा दुई दशक प्राध्यापन र एक दशक विभागीय प्रमुखका रूपमा काम गरी नेपाल फर्केका डा. जनक कोइराला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)मा विज्ञका रूपमा क्रियाशील छन् । साथै, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत छन् । मुलुकमा देखिएको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरमा केन्द्रित रही डा. कोइरालासँग गरेको कुराकानी :
कोरोना भाइरस अर्को एउटा फ्लु भयो, एन्फ्लुएन्जाजस्तै । एन्फ्लुएन्जा जाडोमा हुन्छ । कोरोना बिलाउने होइन कि रहिरहने देखिन्छ । बिस्तारै रोगप्रतिरोधी क्षमता विकास हुन्छ । अमेरिकाले ३० करोडमध्ये १० करोड जनतालाई खोप लगाइसक्यो । हामीले पनि सबैलाई खोप लगाउनुपर्छ । दीर्घरोगीलाई प्राथमिकता दिएर मृत्युदर घटाउनुपर्छ । यो भाइरससँगको युद्ध हो । भाइरसको ब्रेन छैन, हामीसित ब्रेन छ । त्यसैको मद्दतले युद्ध जित्ने हो । युद्धमा जस्तै सबै मिलेर लड्नुपर्छ । युद्धमा सेनाले बचाइहाल्छ भनेर गैरसैनिकले जे पनि गर्न थाले के हुन्छ ? गैरसैनिकले पनि सुरक्षा सावधानी अपनाउने, दुस्मनविरुद्ध सक्रिय हुने गरे युद्ध जित्न सजिलो हुन्छ । -नयाँ पत्रिकाका सुजित महतले गरेको कुराकानी ।
२०७७, २२ आश्विन बिहीबार ०१:३८
अस्पतालमा उपकरण बनाउन खटिरहेका छौं– कोइराला
२०७७, १५ श्रावण बिहीबार ०७:२२
‘सालको पातको टपरी’ले बनायाे लोकदोहोरीमा सर्वाधिक युट्युब ‘भ्युज’
२०७७, २६ श्रावण सोमबार ११:३०
‘शान्त देखिने मान्छे रक्सी खाएपछि किन धेरै बोल्छ ?